Iindaba zeMizi-mveliso - Jeasnn
Ikhaya » iindaba » Industry News
Ngaba uyazi iimfuno zetekhnoloji zeshishini ezichanekileyo?
Izithambiso zentsimbi echanekileyo yenye yeendlela eziqhelekileyo ezihlala zihlangana nazo koomatshini.Isetyenziselwa ikakhulu ukuxhasa izinto zokuhambisa, ukuhambisa ithambeka kunye nokuthwala umthwalo.
Imitya ngamacandelo ajikelezayo, ubude be-w
Ulondolozo oluqhelekileyo lwe-CNC Machining igcina ilungiswe kakuhle
Imishini ye-CNC, njengabantu, nayo igcina ikwimeko efanelekileyo. Ukuba awukuqwalaseli ukuphumla, uya kugula. Izixhobo zomatshini we-CNC zisebenze ixesha elide kwaye kuya kubakho iingxaki zohlobo olunye okanye olunye. Ke ngoko
Ndisigcina njani isikroba ekungcoleni?
Isenzeko esiqhelekileyo sokujija kubomi bemihla ngemihla "kukurusa", nto leyo engothusiyo kwizinto ezininzi zokuvala izinto.ubume obunobushushu, imeko yomoya engcolisekileyo kunye nefuthe lokudleka kwezinto zemichiza.
Izinto eziluncedo ngomatshini wokuvavanywa kwelaser xa kuthelekiswa neendlela zemveli zesandla.
1.Ukuphucula ukusebenza kobhaqo
2.Ukuphucula ukuchaneka kohlolo
3.Reduce izinga ukuthunyelwa ezineziphene
Izinto eziluncedo zeLines Machining Ukuzenzekelayo Imveliso Lines
Umgca wemveliso Jiesheng Hardware (Jeasnn) ikakhulu CNC machining umgca wemveliso esizisebenzelayo.
Ukusetyenziswa kwee-CNC zokufakelwa kwamashishini kwi-Medical Industry
Iindlela zokhetho lwezinto ezihlukeneyo
Indlela ukukhetha i CNC umenzi elifanelekileyo?
Intambo yangaphakathi yemveliso kutheni emva kokuba i-electroplating ivame ukuvala amazinyo okanye ukuvalela kwinto?
Iintlobo ezintlanu zokusetyenziswa kwezixhobo eziphambili
Ikhaya egqithileyo 1 2 Okulandelayokugqibela - Iyonke 19 1 ubhala page Current / Total 2 10 ngephepha ngalinye